MCMI – Learning For All
U Zin Ko Ko
Founder of MCMI
MCMI အနေဖြင့် အင်္ဂလန်နိုငံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံများရှိ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကောလိပ်များနှင့် တက္ကသိုလ်များနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အတွက် လိုအပ်ချက်များဖြစ်သော Higher Certificate, Diploma, Bachelor’s Degree, Master’s Degree နှင့် Doctorate Programs များဖွင့်လှစ်ပေးထားပါသည်။
MCMI အနေဖြင့် နှစ်စဉ် Certificate ကျောင်း သားပေါင်း (၁၃၀၀) ကျော်နှင့် Diploma ဘွဲ့ရ ကျောင်းသားပေါင်း (၆၀၀)နီးပါး မွေးထုတ် ပေးလျက်ရှိနေပြီး Bachelor’s, Master’s Degree များ၊ ကုမ္မဏီအဖွဲ့အစည်းများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် သင်တန်းများ သင်ကြား ပေးလျှက်ရှိနေပါသည်။
+959954329978
+959954329976
+959957320078
+959957320079
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများရဲ့ သင်ကြားမှု၊ သင် ယူမှု၊ သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများကို အ ကောင်း ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ပေးလျှက်ရှိနေပါသည်။
MCMI သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ဦးဆောင်နေသော လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေသူများ၊ စီမံခန့်ခွဲနေသူများနှင့် ကျောင်းသား၊ လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကောလိပ်များနှင့် တက္ကသိုလ်များနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော Higher Certificate, Diploma, Bachelor’s Degree, Master’s Degree နှင့် Doctorate Programs များဖွင့်လှစ်ပေးထားပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ ဦးဆောင်နေသူများအား အထူးပြုပြီး စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အရည်းအသွေး မြင့်မားလာရေးအတွက် ဝါရင့်အတွေ့အကြုံရှိသော ဆရာ၊ ဆရာမများမှ ဦးဆောင်ကာ စနစ်တကျ သင်ကြားမျှဝေပေးမှာဖြစ်လို့ အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိပါမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
MBA (AeU), B.A(Myanmar), DBL
PGDE (MUFL), DM, DMM, DBA, DPS, DOS, A.Abhi
Daw Khin Nyein Su
P.h.D in HRM (Candidates)
Daw Myint Maw Pyone
Mr. Saw Thurein Linn
EDBM, EDHRM, DBA
လက်ရှိမှာတော့ Guide Teacher & Trainer တစ်ယောက် အနေနဲ့ Run နေတာ ၄နှစ်ဝန်းကျင် ရှိပြီဖြစ်သလို ...Freelance MC တစ်ယောက်အနေနဲ့ Run နေတာလည်း ၂နှစ်လောက် ရှိပါပြီ ... MBA တက်ဖို့ အတွက် ကျောင်းတွေ အများကြီး လိုက်စုံစမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ... အဲဒီထဲကမှ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ သဘောကျနှစ်သက်တဲ့ Accreditation ကောင်းတဲ့ ကျောင်းမျိုးကို ရှာရတာတော့ ပိုခက်တာပေါ့ဗျာ ... အဲဒီလိုကျောင်းတွေထဲကမှ MCMI က ဖွင့်လှစ်မဲ့ Swiss MBA ကို ကျွန်တော် ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ... 2019 Nov မှာ On-Campus Program တွေမှာ Certificate Level ကနေ Diploma အထိ အဆင့်ဆင့်သော အမျိုးမျိုးသော ပညာရပ်တွေကို MCMI မှာပဲ အချိန်ပေး သင်ယူရင်း နယ်ပယ်စုံက မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ရခဲ့ပါတယ် ... 2020 March လကုန်ပိုင်းလောက်ကစလို့ COVID-19 Crisis ကြောင့် သင်တန်းကျောင်းတွေ Digital Campus အဖြစ် အသွင်းပြောင်းသွားတဲ့ အခါမှာလည်း MCMI မှာပဲ နောက်ထပ် သင်တန်းတွေ ထပ်တက်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ် ... Digital Campus မှာ အချိန်မရွေးလေ့လာသင်ယူလို့ရတဲ့ Pre-recorded Videos တွေကော ... Interactive Zoom Discussion တွေပါ အပတ်စဉ်နီးနီး ပြုလုပ်ပေးတာကြောင့် ... အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့အချိန် သိပ်မပေးနိုင်တဲ့ ကျွန်တာ်အတွက်လည်း အရမ်းကို အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ် ... ဒါကြောင့် ဒီလို ရေစက်ကြီးလှတဲ့ MCMI ဆိုတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အနာဂတ်အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MBA ကို တက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ...
MBA Candidate [Batch-1]
Ma Htet Htet Soe
နည်းပညာနယ်ပယ်ကနေ စီးပွားရေးနယ်ကို ကူးပြောင်းချင်တဲ့ ကျွန်မတွက်ကတော့ MCMI မှာ Business Management ပညာရပ်ကို သင်ယူဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းက ကောင်းသောရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ စီးပွားရေးပညာရပ်ကို စတင်လေ့လာချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ MCMI က သင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ MCMI မှာ Executive Diploma in Business Management (EDBM Batch-1) မှာ သင်ကြားခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းဘဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ MCMI မှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ကာလအတွင်း နွေးထွေးစွာသင်ကြားခဲ့ရပြီး၊ ဆရာ၊ ဆရာမများကလည်း မိသားစုလိုနွေးထွေးစွာ သင်ကြားပြသပေးလို့ အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ MCMI ကျောင်းကြီးက Facilities ပြည်စုံပြီး၊ စာတစ်ခုဘဲ သင်ကြားပေးတာမဟုက်ဘဲ၊ လက်တွေ့ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေသူများအတွက် အတွေးသစ်၊ အမြင်သစ်များ၊ Excursion Trip များနဲ့ လက်တွေ့လုပ်ငန်းများ လေ့လာခွင့်ရတဲ့အတွက် MCMI ကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Business Diploma (EDBM @ Batch-1)]
U Aung Aung Htet
ကျွန်တော်ကတော့ ဦးအောင်အောင်ထက် (GM) တစ်ယောက်ပါ။
MCMI ကိုရွေးခြယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ အဓိက ကတော့ အချိန်ပါ ရုံးချိန်လွတ်ဖြစ်သလိုသင်တန်းနေရာကလည်း အဆင်ပြေလို့ ရွေးခြယ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Business management ကို ပထမဆုံးတက်ရောက်ဖူးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသင်တန်းက theory သီးသန့် သင်ပေးတာတင်မဟုတ်ဘဲ၊ thinking နဲ့ practical ပိုင်း ၊ knowledge ပိုင်းကအစ ဆရာတွေ/ဆရာမတွေက sharing လုပ်ပေးပါတယ်။ အခြားနယ်ပယ်က မိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်း link တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် MCMI မှာတက်ရတာ ကျွန်တော့ဘဝရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ နောင်လည်း သင်ယူစရာများစွာကိုဆက်လက်သင်ယူရင်း MCMI နှင့်ဆုံချင်ပါသေးသည်။
Business Diploma (EDBM @ Batch-4)
Ma Hnin Hnin Htun
ကျွန်မရဲ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့ MCMI
ပထမဆုံး တက်ရောက်ဖူးတဲ့ ''စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း'' တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ HR သင်တန်းများကို တက်ရောက်ဖူးသော်လည်း Diploma Level အထိမတက်ရောက်ဖူးခဲ့ပါ။ HR Diploma တက်ဖို့ သင်တန်းကျောင်းများစွာကို တက်ရောက်ရန်အတွက် စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ MCMI မှာမိမိအနေဖြင့် အချိန်၊ နေရာ၊ သင်ကြားမည့်ဆရာနှင့် Training Fee မှာ များစွာကိုက်ညီပါသည်။ ထို့ကြောင့် #MCMI ကျောင်းမှ Executive Diploma in HR Management (EDHRM) ကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်း ကိုလာရောက်တက်သည့်အခါ Facilities နှင့် Course များလဲ အလွန်အစဉ်ပြေပြီး စာတွေ့၊လက်တွေ့နှင့် သင်တန်းချိန်အတွင်း Discusion များစွာလည်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းကျောင်းတည်ထောင်သူနှင့် ဆရာ၊ဆရာမများမှာ များစွာရင်းနှီးနွေးထွေး ဖော်ရွေလှပါသည်။ MCMI နှင့်လဲနောက်ထပ် ဆုံချင်ပါသေးသည်။
Thank You! MCMI
ကျွန်တော်နာမည် ဦးညွန့်လှိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ ''San Hein ပညာရေးကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း''မှ အလယ်တန်းပြ ဆရာတစ်ဦးပါ။ ကျွန်တော် စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းတက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသင်တန်းတွေ စုံစမ်းခဲ့ရင်း ''MCMI စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းကျောင်း '' ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ MCMI မှ တက်ဖို့စာရင်းပေးပြီး Executive Diploma in Business Management #EDBM (Batch-1) မှာတက်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းမှ သင်တန်းကျောင်းရဲ့ Founder ဦးဇင်ကိုကို နှင့်တကွ သင်တန်းဆရာ၊ဆရာမများရဲ့စာသင်ကြားမှု၊ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး လမ်းညွှန်ပေးမှုကြောင့် မသိသေးသောအရာများ၊နားမလည်သေးသောအရာများ၊ သိရှိနားလည်ခဲ့ရလို့ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ကျေးဇူးလဲတင်ပါသည်။ MCMIထာဝရအောင်မြင်မှုရပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း နောင်ဖွင့်မည်သင်တန်းများလည်း ဆက်တက်ပါအုံးမည်။
Ma Hnin Wuttyi Htun
အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ စီးပွားရေး ပညာရပ်တွေကိုလေ့လာမယ်ဆို MCMI သင်တန်းကျောင်းကြီးကအဆင်ပြေပါတယ် အလုပ်ချိန်နဲ့လွတ်တဲ့အတန်းချိန်များဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ် group presentation လေးတွေလုပ်ရပါတယ် အသိမိတိဆွေတွေတိုးလာတယ် teamwork တွေဖန်တီးတတ်လာပြီး ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန် စီးပွားရေးတွေအတူလက်တွဲလုပ်ဖြစ်ကြတဲ့အထိ ဝန်းကျင်သစ်တခုကိုပိုင်ဆိုငိခဲ့ရပါတယ် လေ့လာရေးခရီးစဉ်တွေကြောင့်စိတ်အပန်းလဲပြေ ဗဟုသုတလဲရပျော်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ MCMI ပါ Assignment တွေရေးရတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကို ဆရာဆရာမတွေနဲ့အနီးကပ် ဆွေးနွေးအကြံညဏ်တောင်းလို့ရပါတယ် နားမလည်တဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိခဲ့ရင်လဲ ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြန်ရှင်းပြပေးပါတယ် ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလို Best Student Award တွေချီးမြှင့်ပေးတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရလဒ်လေးတွေကိုအမြဲဂုဏ်ယူပီတီဖြစ်ရပါတယ်။ မြဲနွေးထွေး ပျော်စရာ လေ့လာစရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာမို့ ကျောင်းပြီးတဲ့အထိ ခဏခဏအလည်သွားဖြစ်တဲ့နေရာ ကိုယ့်ရဲ့ဒတိယမိသားစုလိုဖြစ်နေတဲ့ MCMI ကျောင်းတော်ကြီး ထူးချွန်ထက်မြက်သောတပည့်ပေါင်းများစွာကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ပါစေ....
July 19, 2019	Education University
Partners of MCMI